व्याक्तिगत जीवन[सम्पादन गर्ने]
मृत्युको शंका र प्रश्न[सम्पादन गर्ने]
२. प्रायजसो बेलायतको बाथ रूममा चाबी लगाउने गरिदैन। भित्र पट्टिबाट ढोका लक् (बन्द) गर्ने सिस्टम हुन्छ। उक्त घरमा चाबिनै थियो भने पनि चाबी भित्र पट्टिबाट बन्द हुन पर्ने हो। भित्र पट्टिको चाबी नखोली कसरी ढोका खुल्यो? ढोका फोडिनु पर्ने? तर ढोका नाफोडी कसरी चाबिले ढोका खुल्यो?
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=यमबुद्ध&oldid=903996" बाट अनुप्रेषित